အမေးများသောမေးခွန်းများ | ၃၃ နှစ်ကျော် CNC စက်၊ သတ္တုထည်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း - SEHO
SEHO / ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးပြီးသားစက်များရောင်းသည့်စျေးကွက်တွင်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ သုံးပြီးသားစက်များအပြင်၊ ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ကျေနပ်စေရန် Bridge Mills နှင့် Angular Milling Head အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းပေးသည်။
အသုံးပြုသောစက်များ | အသုံးအဆောင်
CNC Double Column Machining Center များကိုသုံးသည်
CNC ဒေါင်လိုက် Machining စင်တာများကိုသုံးသည်
CNC Horizontal Machining Center များကိုသုံးသည်
CNC 5-Axes Machining Center များကိုသုံးသည်
CNC Turning Lathes များကိုသုံးသည်
CNC Vertical Turning Lathes ကိုသုံးသည်
CNC Grinders များကိုသုံးသည်
CNC Horizontal Boring Machines များကိုသုံးသည်
Auto Slicing Machines များကိုသုံးသည်
Vision Precision Tools နှင့် Measuring Microscope စက်များကိုသုံးသည်
Angular Milling ဦး ခေါင်း
ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် ဦး ခေါင်း
Dul-နှစ်ဖက် Milling Head
CNC ကြိတ်စက် Cam Rotary Table
ကြမ်းတမ်းသော Boring Bar
လက်ဖြင့် Pulse Generator
Spindle System မှတဆင့် Coolant
SEHO အော်တို Loading CNC စက်
SEHO အော်တို Loading CNC MACHINING CENTER
CNC Machining စင်တာများ
သတင်း | အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
SEHO သည်အသုံးပြုပြီးသားစက်သစ်များနှင့်အသုံးအဆောင်များကိုထောက်ပံ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော one stop solution machine tools supplier ဖြစ်သည်။
Result 1 - 24 of 26
သုံးပြီးသားစက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံမပေးပါ။ စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်လှောင်ရုံသို့ပို့ဆောင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုသန့်ရှင်းပြီးစက်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးသည်၊ စက်မရောင်းမီစက်အခြေအနေကောင်းသည်ကိုသေချာစေမည်၊ စက်များကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။SEHO သည်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးပြီးသားစက်များကိုရောင်းပြီး ၀ ယ်လာခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ရောင်း ၀ ယ်ရေးအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ Read More
အသုံးပြုပြီးသားစက်များရောင်းချရန်ဒေသအကန့်အသတ်မရှိပါ။ Read More
ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းအတွက်ငါတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မူတည်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသောစက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောစျေးနှုန်းများသည် FOB သက်တမ်းပေါ် မူတည်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ Read More
ထုပ်ပိုးမှုနည်းလမ်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်သင်္ဘောကုမ္ပဏီ၏တောင်းဆိုချက်ပေါ်မူတည်သည်။ Read More
ဖြတ်တောက်ထားသောအရည်များ၊ ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောစက်အတွက်အစစ်အမှန်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုမပေး။ မင်းရဲ့ရည်ညွှန်းချက်အတွက် (ယခင်ပိုင်ရှင်ရဲ့စက်ရုံမှာယူခဲ့တဲ့) ဖြတ်တောက်ခြင်းဗီဒီယိုကိုမင်းကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ Read More
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့သုံးပြီးသားစက်တွေကိုရောင်းပြီး ၀ ယ်တယ်။ သင်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် ၀ ယ်လိုသည်ကိုအသိပေးပါရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်: seho@sheo.com.tw Read More
မူရင်းလက်စွဲမပြည့်စုံလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလထုတ်လုပ်သူထံမှလက်စွဲကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မူရင်းထုတ်လုပ်သူကလက်စွဲစာအုပ်ကိုမပံ့ပိုးပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲဒီလက်စွဲစာအုပ်ကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Read More
သုံးပြီးသားစက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အာမခံချက်မှပေးချေမှုမရှိဘဲမည်သူမျှမကိုင်နိုင်ပါ။ Read More
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ထိုင်ဝမ်ကိုမင်းစက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ကူညီဖို့ဖိတ်စာကိုမင်းစာပို့နိုင်တယ်။ Read More
[Angle Head] angular milling head ကိုစက်လုံးတိုင်ပေါ်တွင်ကောင်းစွာတပ်ဆင်နိုင်ပုံကိုမည်သို့သေချာစေသနည်း။
၎င်းသည် angular milling head နှင့် machine spindle ကိုချိတ်ဆက်ရန် flange တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်ပတ်ချာလည်အတိုင်းအတာကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်မှုအနားကွပ်အတိုင်းအတာကိုသင့်အားအကြံပြုလိမ့်မည်။ Read More
[Angle Head] angular milling head များသည် SK သို့မဟုတ် NT taper ကဲ့သို့အခြားအမျိုးအစား spindle taper များအတွက်သင့်တော်ပါသလား။
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီးစျေးနှုန်းကိုတစ် ဦး ချင်းစီဖော်ပြလိမ့်မည်။ Read More
[ထောင့်ခေါင်း] ဤကျီးကန်းခေါင်းကြိတ်စက်များကိုရိုးရာ plano ကြိတ်စက်များတွင်သုံးနိုင်သလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ angular ကြိတ်ခေါင်းများသည်သမားရိုးကျ NC, CNC စက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ spindle taper အမျိုးအစားကိုအရင်အတည်ပြုပါ။ Read More
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျီးကန်းခေါင်းကြိတ်စက်များ၏ဂီယာအချိုးသည် ၁: ၁ ဖြစ်သောကြောင့်အဝင်နှင့်အထွက်မြန်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရမည်မှာ input speed သည် max ထက်မပိုသင့်ပါ။ angular milling head ၏အမြန်နှုန်း Read More
ဒါကရွေးချယ်စရာ function တစ်ခုပါ၊ ဒီ function ကို hydraulic tool clamping system ပါ ၀ င်သောစက်များအတွက်သာသုံးသည်။ Read More
[ထောင့်ခေါင်း] Angular ကြိတ်ခေါင်းများရှိဂီယာများသည်မာကျောသည်သို့မဟုတ်မြေပြင်ဂီယာများလား။
မြေပြင်ဂီယာ။ Read More
[Angle Head] angular milling head များအတွက် HP လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ။
spindle motor (HP) သည် angular milling head များအသုံးပြုမှုကိုမလွှမ်းမိုးပါ။ Read More
[Angle Head] ကျီးကန်းကြိတ်ခေါင်းများသည်ဆီဖြည့်သည်သို့မဟုတ်ဆီလိမ်းသလား။
S200 စီးရီးများသည်ဆီဖြည့်ထားပြီးအခြားကားများဆီလိမ်းထားသည်။ Read More
[Angle Head] ကျီးကန်းကြိတ်ခေါင်းများ၏ထုပ်ပိုးမှု?
SL, SM, SER စီးရီးများကိုစက္ဏူထူဖြင့်ထုပ်ပိုးမည်ဖြစ်ပြီးအခြားထောင့်ဖြတ်ကြိတ်ခေါင်းများကိုသံဘူးဖြင့်တစ် ဦး ချင်းထုပ်ပိုးလိမ့်မည်။ Read More
ပုံမှန်သုံးခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျီးကန်းခေါင်းကြိတ်များအတွက်တစ်နှစ်အာမခံပေးသည်။ ကျီးကန်းခေါင်းအားအသုံးပြုသူအားပေးအပ်သည့်အခါအာမခံကာလစတင်ခဲ့သည်။ အာမခံကာလအတွင်းမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ပါက၊ ပျက်စီးသွားသောပြန်လည်ပြုပြင်မှုကိုဆန့်ကျင်သည့်အစိတ်အပိုင်းသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင့်အားပေးပို့လိမ့်မည်။ ၎င်းပြင်၊ ကျီးကန်းခေါင်းကိုအစိတ်အပိုင်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်မပြုပြင်နိုင်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုပြုပြင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြုပြင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပြန်ပေးပါလိမ့်မည်။ Read More
[Angle Head] ကုန်သွယ်မှုသက်တမ်း?
စျေးနှုန်းများသည်ကုန်တင်ကုန်ချစရိတ်၊ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအခွန်များမပါ ၀ င်သောစက်ရုံသက်တမ်းဟောင်းပေါ်မူတည်သည်။ Read More
[Angle Head] ဒေါင်လိုက် spindle ရှိသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ဆွဲတံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပုံဆွဲပေးပါ။ Read More
[Angle Head] အလိုအလျောက်အညွှန်းကိန်းရွေ့လျားနေသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျီးကန်းခေါင်းကြိတ်အားလုံးသည်လက်စွဲအညွှန်းများနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ Read More
[Angle Head] ဖောက်သည်အတွက်ရွေးချယ်စရာအဖြစ် hydraulic angular heads များရှိပါသလား။
အဲဒါဟုတ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် hydraulic unclamping angular head၊ manual rotate → hydraulic clamping angular head ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်သင် tool ကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းရန်လိုသေးသည်။ Read More
[ထောင့်ခေါင်း] ဦး ဆောင်ချိန်လား။
ကျီးကန်းခေါင်း၏ ဦး ဆောင်ချိန်သည်သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများပေါ်မူတည်သည်။ အရွယ်အစားကွာခြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ Read More
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အညီအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ SEHO ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
SEHO သည်အနှစ် ၃၀ ကျော်လေလေစက်ကိရိယာများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားသမာဓိ၊...
TIMTOS 2019 တွင် SEHO သို့သွားပါ
TIMTOS 2019 တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ချွေတာသော OEM ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော NC plano miller နှင့် angular...
၎င်းသည်ရိုးရာနှင့် CNC စက်များ၏အမြတ်အစွန်းများပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းသည်အော်ပရေတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမရေရာမသေချာသောပြဿနာများကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင် JI CNC ပုံပြောင်းစက်
သင် JI VTL-1600ATC CNC ဒေါင်လိုက်အကွေးမြင့်စက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောလေးထောင့်အရွယ်အစားနှင့်သေးငယ်သောအရွယ်အစားအလုပ်ကဲ့သို့ကြီးမားလေးလံရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္workန်အလုပ်အပိုင်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
ဤ JOHNFORD DMC-85005FACE Double Column Machining Center သည်ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် ATC လဲလှယ်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။...
လက်ဖြင့်ပေါင်းတင်ခြင်းအော်တို TOOL TOOL CLAMPING